ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: October 2007
အခုတော့ ခင်ဗျားမြင်သွားပြီ ...။ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုမြင်တဲ့အခါ အချို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ နေဘုန်းလတ် တစ်ယောက် လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဆိုပြီး အမြင်ကပ်ချင်ကပ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ... ဒီကောင် စာလုံးတွေကို အမဲရောင်နဲ့မှားပြီးရိုက်လိုက်ပြီလို့လဲ ထင်သူတွေထင်ကြလိမ့်မယ် ...။ အချို့ကျတော့လဲ ... အမဲရောင် မျက်နှာပြင်ကြီးကနေ ဘာတွေများ ဘွားကနဲပေါ်လာမလဲလို့ အသဲအမဲ စူးစိုက်ကြည့်ကြလ်ိမ့်မယ်။ အချို့ ဆို အဲဒီ့ မြင်နေရတဲ့ အမဲရောင်ကိုပဲ အဓိပ္ပါယ်တွေအမျိုးမျိုးဖွင့်ချင်ဖွင့်နေကြလိမ့်မယ်။ အချို့ကျတော့လဲ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကျွန်တော်ရေးထားတာတွေကို ခင်ဗျားလိုပဲ ဖတ်နေရတာမျိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ...။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီလိုပါ ...။ အခုဆို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမြင်တယ် နောက်ပြီး ... ဘာမှမရေးထားတဲ့ အမဲရောင် စာမျက်နှာကြီး ... အဲဒီ့မှာ ခင်ဗျားစိတ်ထဲမေးခွန်းတစ်ခုဝင်လာမယ် ... ဘာလဲဟပေါ့ ။ အဲဒီ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့အတွက် ခင်ဗျားဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာက ဒီနေရာမှာ အခရာကျတယ် ...။ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲ လူအမျိုးမျိုးက ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြလိ့မ်မယ် ...။ သူတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေကို မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုရဲ့ သူတို့အပေါ်သက်ရောက်မှုက ကွာခြား သွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကို အသေအချာသိသွားသူလဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် ...။ ဘာမှမသိလိုက်ရပဲ လှည့်ပြန်သွားသူလဲရှိနိုင်တယ် ...။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပဲ အခြားတစ်ခုခုကိုသိသွားပြီး ကျေနပ်သွား တာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့ပြင်ဆင်ထားတယ် ...။
လူနဲ့ သူရဲ့ အနုပညာကို ခွဲမြင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့တော့ ခင်ဗျားတို့ကို ပြောချင်တယ် ...။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ...။
အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို ခံစားတဲ့နေရာမှာ ဒါဘယ်သူဖန်တီးတာလဲဆိုတာကို ဖယ်ထားပြီး ခံစားမှ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝမယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ် ...။ အဲဒီ့လိုမှမဟုတ်ပဲ ... ဖန်တီးတဲ့သူရဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ... ခင်ဗျားတို့ဟာ အနုပညာကိုခံစားသူတွေ မဟုတ်ပဲ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို သူတွေပဲဖြစ်သွားလိ့မ်မယ် ...။ ဥပမာတစ်ခုပေးမယ် ... ကျွန်တော်အခု မြင်ကွင်းတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရပြီး ထိန့်လန့်ခြောက်ခြားနေတယ် ... အဲဒီ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် ပန်းချီကား တစ်ချပ်ကို ဆွဲတယ် ... အဲဒီ့ ပန်းချီကားမှာ အနီ(သွေး)ပါတယ် ... အပြာ(ကောင်းကင်)ပါတယ် ... အနက် (ကတ္တရာလမ်း)ပါတယ် ...။ အဲဒီ့ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကို ခင်ဗျားကကြည့်တယ် ... အဲဒီ့ အခါမှာ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို သိနေစရာမလိုဘူး ... ကျွန်တော်ခံစားသလိုလဲ လိုက်ခံစားစရာမလိုဘူး ... ခင်ဗျားရဲ့အမြင်မှာ အနီက သွေးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ... အပြာက ကောင်းကင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ... အနက်ကလဲ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ...။ အဲဒါက ကျွန်တော့်အတွက်ရော ခင်ဗျားအတွက်ပါ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး ...။ ခင်ဗျားကြိုက်သလို ခံစားလို့ရတယ် ...။ အနုပညာကိုခံစားချင်ရင် ဘာတွေဆွဲထားတာလဲဆိုတာကိုလာမမေးနဲ့ ...။ ဒီအနုပညာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်လို့ရတယ် ...။
အနုပညာဆိုတာဘာလဲ ... ခင်ဗျားတို့ မြင်အောင်ကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ် ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, October 29, 2007 21 comments:
စင်ကာပူမှာ ခဏနေတုန်းက နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ သီချင်းလေးရဲ့နာမည်က ပြည်တွင်းစစ် တဲ့ ...။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ ဒီသီချင်းစာသားလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...။ သီချင်းလေးရဲ့ လင့်ခ်ကို အခု မသိတော့ပါဘူး ... ။ သိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် ... လက်တို့ပေးကြပါဦး ... နားထောင်ချင်သူတွေနားထောင်လို့ရအောင်ပါ ...။
Beat: Slow Go Go
CHO (လူလူခြင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ လူလူခြင်းနှိပ်စက်မှုတွေ
ကြည်ပြာရောင် . . . . . . . . ပိတ်မှောင်ဆဲ
ရင်နာစရာ . . . . . . . . . ငြိမ်းချမ်းကြရမှာလဲ
တစ်နေရာမှာ . . . . . . . . . အသက်ဝိဥာဉ်ကင်းပြီကွယ်
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, October 28, 20072comments:
ဒီပုံလေးက စင်ကာပူမှာနေခဲ့စဉ်က ဇင်ကိုလတ်နဲ့ လျှောက်လည်ကြတုန်းရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ ...။ ကျွန်တော်က ဘုရင်မကြီးရဲ့ဘေးနားမှာဘုရင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ ခန့်ခန့်ကြီးရပ်နေတာပေါ့ ...။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ... ချက်(Chess) ကစားဝိုင်းထဲက ဘုရင်တစ်ယောက်အဖြစ်ကို ကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူး ...။ သူက ဘေးဘီဝဲယာ တစ်ကွက်စီပဲရွေ့လို့ရတာလေ ...။ နောက်ပြီး အားလုံးက သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းကာကွယ်နေကြရတာချည်းပဲ ... သူက ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာ အကာအကွယ်မှမပေးနိုင်သလို သူ့နားကို ရန်သူတွေကပ်လာရင် ဘယ်အပေါက်ကနေ ထွက်ပြေးရမလဲဆိုတာကို လိုက်ချောင်းနေရုံကလွဲလို့ ဘာမျှမှ မတတ်နိုင်တာလေ ...။ အမြင်တင့်တယ်ရုံလေး ထိုင်နေပေးရတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးလို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်မိတယ် ...။ ဒါပေမယ့် တဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ... ကျန်တဲ့သူတွေကို ဟိုဟာလုပ်၊ ဒီဟာလုပ်နဲ့ သူက အမိန့်ပေးစေခိုင်းနေတယ်လို့တော့ မြင်လို့ရပါတယ် ...။ အဲဒီ့လို ... အမိန့်ပေးစေခိုင်းရုံကလွဲလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ ဘုရင်အဖြစ်မျိုးကို လဲ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမကျပါဘူး ...။ ဖွဟဲ့ ... လွဲပါစေ ... ပယ်ပါစေ ... မတော်တဆများ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပြည်မှာ ကျွန်တော်သာ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ ... :-) (အားနေလို့ လျှောက်စဉ်းစားကြည့်တာပါ ...)
ကျွန်တော့်ရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာ စိတ်ထားဖြူစင်သူတွေ၊ အမှန်အမှားကို ခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်အောင် အသိဥာဏ်ရှိသူတွေ၊ တရားမျှတမှုဆိုတဲ့စကားကို နားလည်ပြီး တရားတဲ့ဘက်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်ရဲသူတွေ ၊ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှမလုပ်ဘူးလို့ စိတ်အားသတ္တိ ကောင်းကောင်းနဲ့ ငြင်းဆန်ရဲသူတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေအစွန်းမရောက်ပဲ နည်းမှန်လမ်းမှန်စဉ်းစားတွေးခေါ် နိုင်သူတွေ၊ အတတ်ပညာတွေကိုလဲကျွမ်းကျင်၊ အသိပညာတွေကိုလဲ အမှန်အတိုင်းသိမြင်ကြသူတွေ ၊ အမြင်အာရုံမှာ မောဟအမှောင်တွေမကာပဲ ... အစစအရာရာကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမြင်နိုင်ကြသူတွေ၊ နည်းဟောင်းလမ်းဟောင်းကြီးတွေထဲမှာပဲ တ၀ဲလည်လည်လုပ်မနေပဲ နည်းလမ်းကျကျ ဖောက်ထွက်တွေးနိုင်ကြသူတွေ၊ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ထားမျိုးမရှိပဲ အများအတွက် ရပ်တည်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိသူတွေ၊ အများမိုးခါးရေသောက်တော့လဲ ကိုယ်လဲလိုက်သောက်ရုံပဲပေါ့ဆိုတဲ့ စကားကိုမပြောပဲ အငတ်ခံရဲတဲ့သူမျိုးတွေပဲ ရှိနေအောင် ကြိုးစားမယ် ...။ နောက်ပြီး Chess ကစားဝိုင်းထဲက ဘုရင်ကြီးလို ... ဟိုလူကို ဟိုလိုလုပ်၊ ဒီလူကို ဒီလိုလုပ်လို့ အမိန့်တွေထိုင်ပေးပြီး ... ပြေးပေါက်ကိုအမြဲတမ်းချောင်းနေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်လဲ ကြိုးစားမယ် ...။ ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာကိုတော့ ခင်ဗျားတို့လဲ ၀ိုင်းစဉ်းစား ကြပေါ့ ...။ လူချင်းတွေ့ရင်လဲ ဆွေးနွေးကြ သေးတာပေါ့ဗျာ ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Saturday, October 27, 20077comments:
(For all friends of same ambition)
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Friday, October 26, 20074comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, October 22, 2007 11 comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, October 21, 20074comments:
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, October 15, 20076comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ဒီလိုတည်ဆောက်ယူမှရနိုင်မှာတဲ့လားဗျာ ...
ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ ဒီလိုငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးပါ ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, October 10, 20073comments: